Olee otú adị n'elu gị njikọ Ịntanetị
> Resource> Utility> Olee na adị gị njikọ Ịntanetị
Mgbe ụfọdụ ọbụna na anyị na-akwụ ụgwọ maka elu na-agba njikọ Ịntanetị, ma ahụmahụ ngwa ngwa njikọ Ịntanetị karịrị pụrụ ichetụ n'echiche, dị ka website nchọgharị, faịlụ nbudata, wdg-emekarị anyị na-agbasaghị chọta ihe mere na-agbalị idozi nsogbu a site na-agbalị ngwọta n'okpuru.
Ngwọta 1: Kpọọ-eweta ọrụ gị elele ma ha na-eme na ọrụ ha kwesịrị ekwesị.
Ngwọta 2: adị n'elu a modem njikọ site slowing ya ala.
Ngwọta 3: The modem ọkwọ ụgbọala (ma ọ bụ femụwe maka a ngwaike-njikwa dabeere modem) nwere ike-enwe mmetụta na ọsọ gị, na njikọ pụrụ ịdabere.
Ngwọta 4: Gbochie n'enweghị ikike ohere.
Ngwọta 5: Ndị ọzọ ngwaọrụ na ekwentị gị akara nwere ike imebi njikọ gị.
Otú ọ dị, e nwekwara oge ọ naghị arụ ọrụ maka anyị. Adịla ngwa ịgbanwe gị ISP ma ọ bụ zụta a ọzọ dị ike na kọmputa. E nwere ụzọ adị n'elu gị Internet ọsọ. N'agbanyeghị na ị na-eji Windows 7, Windows XP ma ọ bụ Vista. Na-ebuli yiri ntọala nke na kọmputa gị na netwọk, dị ka MTU, TCP, wdg Ọ dịghị mkpa na ị bụghị ụdị kọmputa whiz ma ọ bụ nka na ụzụ ọkachamara, ma ọ bụ ọbụna na-amaghị ndị a oru okwu mgbe nile. Ị na mkpa iji wụnye a ụdị software, nke nwere ike adị n'elu njikọ Ịntanetị maka gị, dị ka Wondershare 1-Click PC Care. Ihe niile ị chọrọ ime bụ otu click, na ndị ọzọ bụ maka 1-Click PC Care.
Wụnye na ẹkedori 1-Click PC Care na kọmputa gị. Ọ ga-akpaghị aka ego gị PC ọmụma nzọụkwụ site nzọụkwụ, gụnyere PC arụmọrụ, kwụsie ike na nche. A ga-enwe a mkpirikpi akụkọ mgbe ọ bụla nzọụkwụ banyere kọmputa gị ọnọdụ, na oké ndụmọdụ-agbaso. Ị na mkpa na-agagharị na atule N'ihi ya, na-amata ihe ụdị nsogbu gị na kọmputa nwere. Wee pịa "Idozi Ugbu a" ke ịlele ọrụ mere, idozi ndị niile njehie na kọmputa gị.
Chọpụta otú ngwa ngwa gị njikọ Ịntanetị bụ
Mbụ, ka anyị ego njikọ Ịntanetị ọsọ nke gị na kọmputa. Wụnye na ẹkedori a speedup Internet software na PC gị na, na mgbe ahụ, ọ ga-akpaghị aka ego gị PC ọmụma nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Ọsọ nke gị Internet njikọ ahụ ga-egosipụta na atule akụkọ. E nwekwara abịa tinyere nkwanye si 1-Click PC Care na-agwa gị ma gị na Internet ọsọ bụ ngwa ngwa ma ọ bụ. Ọ bụrụ na gị Internet ọsọ bụ n'okpuru nkwanye, gị na mkpa iji see "Idozi Ugbu a" bọtịnụ ọ bịa ọsọ ọsọ. N'ezie, ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwekwara ike ịrụ ọrụ a na-eme ka gị na kọmputa na-agba ngwa ngwa. Ọ bụ nnọọ mfe ọrụ, nri? Ị na-eme otu click, 1-Click PC Care eme niile fọdụrụ.
Nke a bụ nanị otu ọrụ ahụ a usoro na-emere gị na kọmputa. Ọ na-enyere aka ego PC arụmọrụ, PC kwụsie ike na PC nche, ka ego usoro ọrụ ọnọdụ, ndekọ redundancy na junk faịlụ gị PC. Chọta ndekọ njehie, ngwa njehie na usoro njehie maka gị usoro kwụsie ike. Ịchọpụta Windows nche, netwọk nche na onye nzuzo ehi ehi na kọmputa gị, na-eme ka n'aka na ị na dị nchebe na ike Windows gburugburu ebe obibi, na ndị ọzọ. All a aga-eme na-mere ka ndabere gị ọhụrụ na kọmputa na gị click nke Idozi Ugbu a. Nke ahụ bụ ike nke gị otu Pịa.
Ihe ọmụma banyere otú Internet ọrụ
The Internet eji a protocol akpọ Nzipu Control Protocol (TCP) mepụtara na 1970. Ihu ọma, ọ mgbari nnukwu faịlụ n'ime obere ngwugwu nke banyere 1500 bytes, onye ọ bụla na-ebu adreesị nke ziri ozi na onye nnata. The eziga kọmputa Site n'ibu a hà, na-echere maka a mgbaàmà si nnata na-ekweta, ya mma mbata, na mgbe ahụ na-eziga na-esote hà.
Ọ bụrụ na ọ dịghị nnata abịa azụ, ziri ozi Site n'ibu otu hà na ọkara ọsọ nke gara aga otu, na akuko usoro, na-iji nwayọọ oge ọ bụla, ruo mgbe ọ rụpụtara ezi ihe.